SIDA LOO SAMEEYO KURSI FADHIGA AH OO KA SOO BAXA SARIIRAHA GURIGAAGA, ADIGOO TALLAABO TALLAABO TALLAABO AH, SAWIRO - SAMEE NAFTAADA
Waxa aan u baahanahay
Abuurista waxay ubaahantahay qalab iyo qalab sida:
qoryaha laga arkay, tuubada warshadaha, qalabka wax lagu shubo iyo qalabixinta;
qalabka: nalka, ciddiyaha;
Qaab dhismeedka dhejinta - xaglaha, qulqulka, xarigyada;
qalabka iyo qalabka loogu talagalay xoqidda - waraaqaha, waraaqaha, faylasha;
rinji - rinji, rinjiga;
qalabka (lugaha, jooji, iwm.);
dhar jilicsan iyo fiilo.
Waa muhiim! Boorso madhan oo miisaankiisu le'eg yahay 20 kiilogaraam ayaa awood u leh inay kor u qaadaan illaa 1000 kiilo oo miisaan.
Naqshadeynta naqshadaynta isticmaalka suuqyada ayaa hadda ku cusub, iyo dadku waxay ku faraxsan yihiin inay fiiro gaar ah u yeeshaan alaabada gudaha. Qaar ka mid ah macaamishyada qaarkood waxay soo saaraan dhammaan khadadka alaabooyinka kuwaas oo ku jira baahida wanaagsan.
Waxaan kugula talineynaa inaad ka akhrido sida loo xareeyo wallpaper, si loo xakameeyo daaqadaha, sida loo xiro indhoolayaasha daaqadaha, sida loo dhigo furayaasha iftiinka iyo boorsada guriga.
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad go'aansato qaabeynta kursiga mustaqbalka. Waxay noqon kartaa badeecad fudud sida sariirta ama wax aad u adag sida gees jilicsan. Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad iibsato kuwan suuqyada oo kale. Waxaa lagu dalbanayaa warshadaha musqulaha, halkaasoo sargooye loo sameeyo hab gaar ah.
Sidoo kale, naqshadahan waxaa lagu heli karaa iyada oo lagu heshiinayo hoggaanka dukaanka raashinka, halkaas oo ay noqdaan kuwo aan loo baahnayn. Xaaladaha ba'an, waxay ka madax banaanaan karaan guddiyada.
Ma taqaanaa? Boqortooyada Boqortooyada, ayaa fadhiga loogu talagalay oo kaliya loogu talagalay Grand Vizier, gacanta midig ee Sultan.
Gacmaha waa in lagu baaraa ciddiyaha ama cambarada, adigoo si taxadar leh u saaraya walxaha kor u kaca. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad doorato naqshadahan oo aan haysan wax burburin kara hantidooda inta lagu jiro isticmaalka. Salladaha horay loo isticmaalay waa in lagu nadiifiyaa burushka qalalan iyo biyo ka durugsan tuubada. Ka dib markii pallet la nadiifiyey oo la qalajiyey, waa in la qaso. Tani waxaa la sameeyaa iyadoo la adeegsanaayo mashiinka jajaban, mashiinno leh heeso gaar ah ama gacanta - warqad emery ah.
Haddii alaabta guriga mustaqbalka loo qorsheeyay in la isticmaalo dibedda (makaanka, galka, iwm.), Dusha sare ee suufka waa in lagu daboolaa asal udub oo loogu talagalay shaqada dibadda - tani waxay ka ilaalinaysaa alaabta qoyaanka.
Waxay noqon doontaa mid waxtar kuu leh inaad ka akhrido sida si madaxbannaan looga soo saaro rinjiga hore ee derbiyada iyo qashin ka sameysan saqafka, sida loo sameeyo qaybta rinjiga ee albaabka, iyo sidoo kale sida loolaasho derbiga qalabka mashiinka.
Wixii soo saarida kursiga caadiga ah, lix dabaq waa mid faa'iido leh, laakiin waxaa fiican inaad hesho siddeed - tan iyo markii aad shaqeynayso waxaad u baahnaan kartaa in aad ka mid noqoto mid ka mid ah dhismayaasha ku-meel-gaadhka ah.
Nidaamka qiyaasidda ee fadhiga fadhiga waa sida soo socota:
Gacmaha waa la nadiifiyaa oo lagu qalajiyaa.
Laba sargaal ayaa la dhigaa wajiga oo la isku dhejiyaa kuraasta, si la mid ah labo dhisme oo badan ayaa la isku xiraa.
Suufka kale ayaa si taxadar leh loogu arkay laba qaybood oo isku mid ah - dhabarka kursiga mustaqbalka ayaa laga sameyn doonaa.
Ma taqaanaa? Naqshadda tikidhada ee ugu dambaysay ayaa markii hore lagu tijaabiyay Maraykanka 20-kii qarnigii la soo dhaafay. Warshadaha Maraykanku ee wakhtigaasi si dhakhso ah u ogaaday in qalabkan la'aantiis, alaabtoodu lama dhaqaajin karin xawaare ku filan.
Astaamaha waxaa lagu dhajiyaa dhammaan dildilaaca, isdaba marinta iyo ciladaha kale.
Iyada oo asaasiga udheerta, dhismayaasha waxaa lagu daboolay lakabka muraayada iyo rinjiga midabka loo baahan yahay.
Markaad fadhiga mustaqbalka waxaad ku dari kartaa "lugaha" - waxay noqon kartaa labada taayir, iyo baararka qoryaha.
Marka xigta, laba siyaabood oo isku xiran ayaa la isku dhejiyaa, badiyaa waxa lagu sameeyaa nashqad aad u adag.
Markaad fadhiga mustaqbalka waxaad u baahan tahay inaad dhabarka ku xirto adoo adeegsanaya dhammaan naqshadaha isku midka ah.
Iyada oo la malaynayo aragti ku filan, waxaad ku dari kartaa armrests, armaajo, qalabyo iyo qalab kale oo loogu talagalay gabal cusub.
Waa muhiim! Ka dib markii la soo saaro saldhiga, waxaad ku xiri kartaa qaybaha daboolka ah ee qaabka joodariyeyaasha, joodariyeyaasha, barkimadda. Alaabada noocaan ah waxaa loo diyaariyey horay ama si gooni ah u iibsaday. Waxaad ku xiri kartaa waxyaabahaan adigoo isticmaalaya qalabka warshadaha iyo qalabka hardwareka.
Video: habka loo sameysto kursi fadhiga ah
Ka hor inta aysan daboolka ka qaadin fadhiga waxaad u baahan tahay inaad go'aamiso midabada midabtakoorka ay ku habboon tahay alaabta cusub ama hadda jira. Isla sidaas oo kale ayaa lagu dabaqayaa walxaha jilicsan - barkimooyinka, joodariyeyaasha. Waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in horey loo mariyo in midabada muraayada alaabtu ay la wadaagto midba midka kale.
Waxaan kugula talineynaa sida loo dhiso barkad dabaasha, qubeyska, musqulaha, maqaarka iyo makhaayadaha, iyo sidoo kale sida loo sameeyo xashiish dhagax, pergola, gaas, shimbiro, biyo qallalan, biyo dhaamis ah, marin ka baxa qoryaha qoryaha oo la taabto gacmahaaga.
Haddii dhismayaasha la daboolo lackal kaliya, markaas barkimadu waa inay ku celceliyaan qaabka dusha sare ee saldhigga, oo laga sameeyay joonis. Suufiyeyaasha waxaa lagu rinjiyeeyn karaa midab kasta, halka xayiraya furaashyada iyo barkimooyinka midabada u dhiganta.
Midabada madow waxay ku habboonyihiin naqshadeynta guryaha dalka ama beerta daaqsinka ah, sida suufka lagu rinjiyeeyey midabkani iyo barkimooyinka midabkoodu yahay mid aan la dhejin karin oo ka fiicnaanaya asalka dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee gasebos. Naqshadaha cad waxay u muuqdaan kuwo hagaagsan hoolalka iyaga oo leh boogaha midabada midab leh, sidoo kale waxay u egyihiin kuwo aad u xiiso badan oo la daabacay. Meelaha la jiido waa kuwo ku habboon gudaha gudaha guryaha gaarka loo leeyahay iyo dhismayaasha magaalooyinka. Ugu horreyn, midabkaas oo kale, muhiim maahan in la dhaqo barkin marar badan, iyo marka labaad, tufaaxa madow waxay ku haboon tahay jawiga fiidkii habeenkii.
Tusaalooyinka qolka kaniisadaha ka soo jeeda
Abuuritaanka sofasyada qaababka alwaaxda waa habka hal-abuurka ee xiisaha leh. Waxaad abuuri kartaa naqshad fudud oo laba qof oo nasasho ah, ama waxaad codsan kartaa habka hal-abuurka ah ee abuurista alaabta guriga. Tixgeli tusaalooyin yar oo ah xeelado naqshad leh
Layli kala duwan. Qalabka fadhiga ma ahan "kaliya", laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay ujeeddo kala duwan. Alaabtaan waxaa loo bedeli karaa sariir, kursi, kursi laba dabaq ah. Si kastaba ha noqotee, dhibaatooyinka qaarkood lagama maarmaan - waxaad si fudud u soo saari kartaa qaybaha dhismaha ee alaab guri oo isku mid ah. Alaabta noocaas ahi waxay ku lug leedahay oo keliya ma aha madadaalada, laakiin sidoo kale, tusaale ahaan, xafladaha shaaha. Meelaha ka soo baxa waxaad ku dhejin kartaa wax kasta ama waxyaabo sida saxamada leh cabitaan ama cunto, alaabta dharka, buugaagta, iwm.
Baro sida loo sameeyo saqafka sarraysa, iyo sidoo kale sida loola daboolo saqafka leh ondulin iyo foornada birta.
Sariirta sariirta. Waxyaabaha qaaliga ah ee dabiiciga ah waxay leeyihiin muuqaal aad u jilicsan oo u oggolaanaya milkiilayaasheeda inay ka fariistaan ​​adduunka ka baxsan. Saacaddani waa mid aad u ballaaran, casri ah oo raqiis ah. Filimada muusikada. Guryaha dabaqyada ah ee lagu soo ururiyey heerar kala duwan, oo ku yaalla hortiisa cinwaanka guriga, waxay si buuxda u buuxin doonaan booska qolka weyn waxayna ku haboonaan doonaan inay daawadaan filin xiiso leh.
Waa arrin sahlan in la abuuro sanduuq weyn oo noocaas ah - mar kasta oo isku xigta muuqaalka waa mid ka mid ah pallet ka sareeya kii hore. Natiijo ahaan, shineemaha saddexda xaafadood ayaa si xor ah u awood u leh in ay meel gaaraan ilaa labaatan daawadayaal. Kaniisadaha gacanta lagu sameeyo ayaa loo qorsheyn karaa markaad go'aansatid. Halkan waxaa loogu talagalay naqshadeeyaha waxaa jira bannaan weyn oo loogu talagalay hal-abuurka dhismaha alaabta iyo muuqaalkiisa, taasoo, habka loo bedeli karo si joogto ah, maaddaama naqshadeynta alaabta guriga waa in ay si isdaba joog ah u beddeshaa daaqa, jarista, iyo qalabka.
Waxaan dhihi karnaa sofas ka soo suuqyada waa naqshad dadka waaweyn oo si ammaan ah u tijaabin kara muuqaalka iyo qalabka guryaha. Intaa waxaa dheer, haddii si lama filaan ah wax aysan jeclayn, waxaad had iyo jeer badali kartaa wax kasta oo sheyga ah sida waafaqsan habka cusub ee miisaanka iyo dhadhankiisa.